I-cologne efanelekileyo kunye neziqholo kweli hlobo | Amadoda aQinisekileyo
Isibini kunye nokwabelana ngesondo
Ukuhlaziya iziqholo kweli hlobo
UPaco Maria Garcia | | Iifumba
Iintsuku zasehlotyeni ziyafana neeholide, ilanga, isanti nolwandle. Yi ixesha lokuphumla nelingacwangciswanga.
Oko akuthethi ukuba sityeshela ezinye zezinto ezisisiseko, ezinjengokunxiba rhoqo nokunuka kamnandi. Iziqholo ezifanelekileyo zasehlotyeni zinokusinceda ukuba sinikele, kwimeko yethu yentlalo, ukubonakala kunye nobukho obuya kwenza umohluko.
1 Zeziphi iziqholo ezipholisa ihlobo?
1.1 I-Luna Rossa Carbon
1.2 IMidlalo yeKhaya 2017
1.3 I-Polo ebomvu ebomvu
1.4 I-Chrome ecocekileyo i-Azzaro
Zeziphi iziqholo ezipholisa ihlobo?
I-Luna Rossa Carbon
Eli vumba le Prada limele ukulinganisela phakathi kokutsha kunye nokutya. Uburhabaxa belitye buhamba nobushushu bevumba elimnandi lasehlotyeni.
Amanqaku aphezulu eCitrus, ngokuthe ngcembe azaliswa ngamalahle, i-lavender, isinyithi kunye neendawo ezithile zasemanzini.
Izipesheli ukuhlala ixesha elide kunye nokuqikelela, Imiba ebaluleke kakhulu ekufuneka ithathelwe ingqalelo kwiintsuku zokubila okuphezulu.
Isiqhumiso esinobubanzi obudala, Ngaphakathi ebhotileni eneemilo zakudala zendlu yase-Itali.
IMidlalo yeKhaya 2017
Ukusukela ngo-2008, Imidlalo yasekhaya nguDior yenye yezona ziqholo zithandwayo ngamadoda Uninzi lwehlabathi. Njengayo yonke imigca yamadoda yeziqholo zendlu yaseFrance, iyafana nayo amandla, amandla kunye nokuziphatha.
Ushicilelo lowama-2017 lwenzelwe uku oqeqesha kwaye onwabele ngokupheleleyo kwiintsuku ezinde ezinelanga, kodwa ngaphandle kokuphulukana nobuhle.
yakhe Iivumba ezinobukho obuqinileyo bezitrasi (iorenji kunye nelamuni), ezinikezela kwintliziyo yepepile kunye newalnut.
I-Polo ebomvu ebomvu
Ngokutsho kwabadali bayo, kunjalo isiqhumiso esilungiselelwe amadoda ngaphandle koloyiko.
Ukuqala ngamanqaku eorenji, intliziyo ibonisa a Ivumba elivelisa imvakalelo yekhofi esandul 'ukutsha, zongezwa ngamatye e-ebony kunye necocoa.
Kuyinyani kwisitayile sobudoda somgca wePolo kaRalph Lauren, kunjalo zilungele ubusuku ngaphandle kobusuku behlobo.
I-Chrome ecocekileyo i-Azzaro
Enye iklasikhi ephantsi koqwalaselo, ilayishwe amanqaku e-citrus ayenzelwe ukusebenza njengokuhlaziya kwiintsuku ezishushu.
Ukongeza, icebisa Umxube wezinto zesintu ezinomoya wangoku.
Ku malunga ivumba eliguquguqukayo, kokubini kumathuba okusetyenziswa kwayo, nakwiminyaka yobudala yoluntu.
Ubuhle, amandla kunye nobunono, Zonke kwibhotile enye.
Imithombo yemifanekiso: IPunto Fape / iDiario eyongezelelweyo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Iifumba » Ukuhlaziya iziqholo kweli hlobo
Iindevu zeentsuku ezintathu-iimpazamo omele uziphephe
Ezinye iifilimu zokuqala zokubukela kwintsalela yehlobo
Fumana iindaba zamva nje kwifashoni yamadoda nakwindlela yokuphila kwi-imeyile yakho.